Alahady, Septambra 24, 2006 Alahady, Septambra 24, 2006 Douglas Karr
Tamin'ny faran'ny herinandro teo dia niasa tamin'ny logo sy ny drafitra fandraharahana / takiana ho an'ny Compendium Software aho, orinasa iray izay natomboko izaho sy ny mpiara-miasa aminao ho an'ny rindrambaiko Social Media Optimization. Fotoana mahaliana ity. Nisarika fifantohana vitsivitsy avy amin'ny orinasa VC izahay, manana fahitana vokatra lehibe… ny hany ilainay dia ny fotoana! Samy miasa manontolo andro izahay roa ka fanamby ny vita.
Omaly dia nanangana ny logo ho an'ny orinasa aho. Manantena aho fa tianao izany!
Jereo ny toerana ho famaritana ny Compendium.
Afaka mitoraka bilaogy momba ny mofo ve aho?
Sep 24, 2006 ao amin'ny 3: PM PM
Maimbo voalavo aho. Ratsy maimbo AIM3 maimbo be mba ho marimarina kokoa. Tonga maloto be ny fikarohana nataoko Google; Manolotra anarana hafa ho an'ny orinasanao aho. Hihazakazaka koa aho. Away. Mandosira haingana raha mpiara-miasa aminao tokoa ny AIM3. Toa olona tsy mivadika sy tsara fitondran-tena ianao. Tsy izy. Ary i SMO dia eo an-tampon'ny làlany maimbo be. Raha tsy AIM3… miala tsiny amin'ny fanapoahana ny mpiara-miasa aminao.
Sep 25, 2006 ao amin'ny 3: PM PM
Somary mareva-doko loatra amin'ny tsiriko, miampy ny sary mampatsiahy ahy bebe kokoa ny tadin'ny ADN fa tsy ny media sosialy…
Ny rohy amin'ny "fampahalalana" dia mankany amin'ny bilaoginao; fa heveriko fa mpikirakira toerana fotsiny ity rohy ity…
Tokony holazaiko fa tiako ny sary famantarana Mac OS9 taloha - fitambaran'ny fikitikitry ny olombelona, ​​ny solosaina ary ny finamanana / fifaneraserana. Angamba zavatra toa izany?
Izany dia nilaza fa hevitra iray ihany io.
Symbols.com loharanon'ny aingam-panahy.